Dadka deegaanka Isiolo ee Kenya oo sheegay tirada dhalinyarada ka tagay kuna biiray Al Shabab | Baydhabo Online
Dadka deegaanka Isiolo ee Kenya oo sheegay tirada dhalinyarada ka tagay kuna biiray Al Shabab
Odayaasha iyo dadka ku nool kaantiga Isiolo ee dalka kenya, kuna dhow xuduuda soomaaliya ay la leedahay dalkaasi, ayaa sheegay in ku dhowaad 19 qof oo dhalinyarada ah ay kasoo gudbeen xuuda kenya ay soomaaliya la leedahay.
Sidoo kale dadka deegaanka ayaa sheegay in ay jiraan 14 ruux oo kale kuwaasoo aan la aqoon halka ay ka yimaadeen balse waxaa ay xaqiijiyeen in ay ka gudbeen xuduuda.
Odayaasha iyo dadka ku nool kaantiga Isiolo ee dalka kenya, ayaa hadalkaasi ka sheegay kulan ay kusoo bandhigayeen tirada dhalinyaradii ka tagay deegaanka ee u gudbay dhanka soomaaliya ee ku biiray Al Shabab.
Indhaawaala ah, waxaa dadka deegaanka lagu eedeeynayay in aysan la socon dhalinyarada deegaankaasi ka baxeysa eek u biireysay Al Shabab ama u-gudbaya dhinaca soomaaliya.
Sidoo kale biloowgii sanadkaan, ayaa ciidamada ilaada xuduuda ee dalka kenya, waxaa ay xireen xuduuda gaar ahaan dhinaca soomaaliya, waxaana sidoo kale la sheegay in ciidamada ay la socdaan dhaq-dhaqaaqa xuduuda.
Dowladda kenya ayaa kamid ah ciidamada howglladda ka wada soomaaliya, kuwaasoo gudaha soomaaliya kula dagaaalaya Al Shabab.